China High-Power Fiber Laser tingcha Machine Manufacturer na Supplier | Guo Hong
High-Power Fiber Laser tingcha Machine
Igwe akụrụngwa ọkụ laser nwere ike iji isi eriri laser nke ụwa na-ebute laser dị ike nke na-elekwasị anya na ihe ndị ahụ na-eduga na agbaze na evaporation ozugbo. Akara akpaka na-achịkwa usoro nchịkwa ọnụọgụ. Igwe ihe omuma a na-ejiko teknụzụ laser dị elu, njikwa ọnụọgụ na nkenke igwe teknụzụ.
High-ike eriri laser ọnwụ igwe.
Na-echebe pover na akpaka kennyeghari table.
Thekpụrụ ọrụ nke eriri laser ịcha igwe
Ọkara oghere na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ
Okpokoro okpokoro a na-ekpo ọkụ nke Cyclonic, ya na obere ebe a na-ekpo ọkụ, na-ezere nrụrụ nke ihe ndina igwe n'ihi ogologo oge dị elu, Nye nkwa siri ike maka ndị ahịa iji chọpụta mbadamba ogologo oge nke ọkara na nnukwu efere.
Germany Precitec ịcha isi-teknụzụ ojii nke isi ọnwụ laser
Ngwunye na-enweghị ọrụ, ọrụ ọsọ ọsọ, na-elekwasị anya na akpaaka, na-agbanwe ihe dị iche iche na ọkpụrụkpụ nke efere. Obere mpempe akwụkwọ, elu na-enwu gbaa, ngalaba na-eji ire ụtọ na-enweghị nsị, A na-emechi ihe owuwu nke isi laser kpamkpam, nke nwere ike igbochi akụkụ anya ahụ site na ntụ, na nke ahụ, ọ bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya.
Reticulated nkedo aluminum doo
Nnukwu nrụgide a na-atụnye alumium, nke nwere ezigbo arụmọrụ na-agba ọsọ, nguzogide siri ike na nrụrụ, ịdị arọ ọkụ, ike dị elu ma na-adịgide adịgide karị, ụdọ nwere ike nweta nzaghachi na-agba ọsọ dị elu ma melite arụmọrụ nhazi.
Smart njikọta usoro
Ejiri usoro nchịkwa nwere ọgụgụ isi iji ghọta usoro mmepụta ọhụụ na njikọta ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Mee ka arụmọrụ siri ike dịkwuo oke ma belata ihe ọghọm.
IPG laser isi
Onye ama ama ama amaala laser n'ụwa. Ike ike ọnwụ, ịcha ọkpụrụkpụ nke mpempe akwụkwọ metal nwere ike iru 80mm. Ezigbo mma mma na ike dị elu. Elu arụmọrụ eletriki anya na-arụ ọrụ nke ọma, ike oriri dị ala, na ọnụ ahịa mmezi dị ala
A ike akara usoro kpọmkwem maka laser ọnwụ igwe, Comprehensive nchoputa ọrụ iji chọta mmejọ ngwa ngwa, The kwekọrọ ekwekọ usoro nchekwa data nwere ike ịtọ dị ka dị iche iche ihe na ọkpụrụkpụ, Oru oma akpaka nesting ọrụ., Nkwado ngwe ngwe nnyocha na mgbagwoju ndịna-arụzi idozi ọrụ, Akpaghị aka na-ebuli ọnwụ ụzọ, Soro ọgụgụ isi na-eweli na leapfrogging ọrụ iji mee ka igwe ọzọ mgbanwe na mee ngwangwa ndị ọzọ ngwa ngwa.
Ngwaọrụ igwe GHJG-3015 ◆ GHJG4020 ◆ GHJG6020 ◆ GHJG-6025 ◆ GHJG-6030
Mpaghara ọrụ 1500x3000mm ◆ 2000x4000mm ◆ 2000x6000mm ◆ 2500x6000mm ◆ 3000x6000mm
Max. Mgbagharị Ọsọ 120m / nkeji
Ọsọ ọsọ 1.2G
Ikwenye ziri ezi 3 0.03mm
Ntughari ± 0.02mm
Na ọdabara ike 6000W-20000W
Bee ihe nlele
1. Nnukwu ọnụ ala: ịcha ụdị mpempe akwụkwọ ọ bụla site na iji ikuku;
2.High arụmọrụ: na mbụ dị eriri laser isi mmalite, arụmọrụ arụmọrụ; Oge ndụ ha nwere ike karịrị awa 100,000.
3.High igbutu oke na arụmọrụ: igbutu ihe karịrị mita 10 nke obere efere kwa nkeji.
Nlekota 4.Laser n'efu.
5.Oghere na elu dị larịị ma dịkwa mma site na obere ndaghari, dị mma na mma.
6.Imported servo moto na gearing usoro adịru ọnwụ.
7.Versatile software na-enyere dị iche iche onyeicalzi na ederede ederede imewe na ọdabara ubi, ime ihe dị mfe, mgbanwe na-adaba adaba.
8.Cutting metal mbadamba ma ọ bụ akpa, tumadi maka ngwa ngwa ịcha igwe anaghị agba nchara, carbon ígwè, manganese ígwè, kpaliri Ibé akwụkwọ, alloy Ibé akwụkwọ, obere metal, wdg
Nke gara aga: 8 Year ekspootu Industrial Laser Machine - Nkedo Aluminium Doo - Guo Hong
Osote: Ofụri Esịt nchọ Fiber Laser tingcha Machine
cnc eriri laser ịcha igwe
eriri laser cnc igwe
eriri laser cutter maka ire ere
eriri laser cutter igwe
eriri laser cutter price
eriri laser ịcha igwe china
eriri laser igwe
metal eriri laser ọnwụ igwe
Ngwa anya Fiber Laser tingcha Machine
Ofụri Esịt nchọ Fiber Laser tingcha Machine
Large Format Ofụri Esịt Akpanyere Exchange Isiokwu Lase ...
Exchange Isiokwu Fiber Laser tingcha Machine
Open Type Fiber Laser tingcha Machine